Tiorkia : Sekolin’ny Natiora , Mampahatsiahy Antsika Izay Adinontsika · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraEzgi Irmak Yücel
Voadika ny 07 Oktobra 2014 7:57 GMT
Vakio amin'ny teny Esperanto , Français, Español, Filipino, Ελληνικά, English
Tsy toy ny sekoly mahazatra ny “Doğa Okulu” na Sekolin'ny Zavaboary, izay miorina eny amin'ny faritra avo indrindra any Eski Orhanlı, tanàna iray tsy misy mipetraka any an-tendrombohitra akaiky ny vohitr'i Seferihisar. Tsy mba misy fandaharam-pianarana na mpampianatra raikitra ao. Mpianatry ny voary daholo ny rehetra ao “Doğa Okulu”, miverina indray amin'ny fahalalàna tany am-boalohany izay avy amin'ireo zavamiaina, amin'ny alàlan'ny fakàna tahaka ny voary ihany: ny andrana, ny traikefa sy ny fivoaran'ny olona maro miaraka kanefa tsy misy fandaharam-potoana henjana.
Nomena an'i Doğa Okulu hanaovana fikarohana ilay sekoly ambaratonga voalohany tao Eski Orhanlı’. Nohavaozina niaraka tamin'ny fanampian'ny Doğa Derneği (ONG Tiorka malaza momba ny tontolo iainana) sy ireo mponina any amin'iny faritra iny ary ny mpitantana ny tananan'i Seferihisar izany. Nanamarina ny voalohan-desona nomen'ny sekoly ny olona ny famoronana ny Doğa Okulu : nampifangaroin'ireo mpiasa an-tsitrapo ny fahaiza-manao taloha sy ny vahaolana maharitra amin'izao fotoana izao mba hanorenana indray ilay trano efa ravan'ny fotoana. Nisokatra tamin'ny Febroary 2014 ny vavahadin'ny Doğa Okulus.
Mibitsika i Merve Ozayitgu iray amin'ireo mpianatra :
Iray amin'ireo mpanohana fototry ny Doğa Okulu ny MAGMA, gazetiboky jeografika Tiorka vao misandratra.Tamin'ny volana Jolay, nampanao fizàrana manoratra sy fanaparitahana momba ny resaka tontolo iainana i Kemal Tayfur sy i Özcan Yüksek, mpiara-mamorona ilay gazetiboky.
Ankoatra ny fampianarana indray ny leson'ny fiainan'ireo ntaolo Anatolia, dia manao kinasa fikarohana mifototra indrindra amin'ny tontolo iainana izay tohanan'ireo mpiasa an-tsitrapo sy ireo mpampianatra amin'ny Oniversite ny Doğa Okulu. Iray amin'ireny ny Kinasa amin'ny harena voa-janaharin'i Seferihisar izay mikendry ny hiraketana ao anaty sarintany ny toerana misy ireo biby sy ny zavamaniry any Seferihisar. Nanomboka tamin'ny volana Martsa 2013 no nanaovan'ny mpitantana ao an-toerana io kinasa io ary nanomboka tamin'izay no nanangona'ireo mpandray anjara ireo vaovao ilaina momba ny tontolo iainana manodidina an'i Seferihisar. Nahitana andianà vorona an-drano Cory ohatra tany amin'ny helodranon'i Sığacık.
Ankoatra izay, nanangana vovonana iray momba ny resaka fikajiana ny tontolo iainana, toy ny Alakır Kardeşliği (firahalahian'ny Alakır), izay manohitra ny fanorenana ilay tohodrano famokarana herinaratra lehibe iray ao amin'ny Lohasahan'i Alakr ny sekoly.
Mibitsika ny fanoherana ny fanorenana ilay tohodrano i Ozcan Yuksek mpiasa ao amin'ny MAGMA ary manamafy fa faritra voaaro ara-dalàna ilay faritra :
Vao tonga aho dia nahita ankizy sy tanora miasa manamorona ny renirano amin'ny làlako mankany an-tanàna. Tsy mba tahaka ny mponina any an-drenivohitra ry zareo fa nitsikitsiky. Ny sasany namboly hazo, ny sasany nandroaka fako [izay latsaka any anaty rano] . Shalwar ( pataloha hatreny an-kitrokely) sy baoty lava mavo no nanaovan-dry zareo, ny ahy kosa pataloha’ jean’ vaovao, kiraro ‘Converse’ mena ny ambaniny…
Noho ny ezaka nataon'ny mpitantana ny tanàna dia lasan'i Seferihisar ny toerana voalohany any Tiorkia hamonjena ny hetsika Cittaslow/Slow Food (fikambanana iraisam-pirenena manentana ny tsirairay hanaja ny tontolo iainana amin'ny resaka sakafo). Fonenana vaovao arovana ara-kolontsaina sy ara-ekolojia i Cittaslows ary mikendry ny hanavotana ny tontolo iainana ao an-toerana sy ny fomba fahandro nentim-paharazana amin'ny amboletran'ny fanatontoloana. Tohanan'ny mpitantana ny tanànan'i Seferihisar ny vokatra ao an-toerana ka isan-kerinandro dia amorainy ny tsenan'ny ‘slow food’ mba hahafahan'ny mpamokatra mivarotra ny vokany mivantana amin'ny mpanjifa. Mba hampitomboana ny fahasamihafan'ny vokatra sy ny kalitaony, dia misy ny foara isam-paritra izay ihaonan'ireo mpamokatra mba hifanakalozana masomboly.